March 2013 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on March 27, 2013 by kyawkyawoo
Source: Kaung Kin Ko‘s status. ဦးဝီရသူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကိုင်းနက် ကနေ ထပ်ပြီး မီးမွှေးသွားတာပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့သတင်းတွေကတော့ ခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုးပေါ့။ အဲဒါတွေသာ…
Kaung Kin Ko sharedalink. March 8 ဂဏန်းသုံးလုံးတွေကို အရမ်းခေတ်ထလာပြီး မျက်စေ့နောက်လာလို့ blog က post အဟောင်းကို ပြန်တင်တာပါ။…
Posted on March 26, 2013 by kyawkyawoo
Burmese Bin Laden Is Buddhist Monk Wirathu behind the Violence in Myanmar ? By Gianluca Mezzofiore Sectarian clashes have erupted… Read more Burmese Bin Laden or racist Buddhist Monk Wirathu’s hate speech video
Posted on March 25, 2013 by kyawkyawoo
50 People Killed and Burned Down On Spot in Meiktila ===================================== March 24, 2013 Video –…